लालबाबुलाई दुतावासका कर्मचारीले धम्क्याउदा... :: Kitab Kiro - Complete Book News
२०७४ मंसिर २३ गते लालबाबु पण्डित : पुस्तक अंश
कोइराला परिवारका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई एमाले नेता लालबाबु पण्डितले पराजयको स्वाद चखाएकाछन् |केहिबेरअघि सम्पन्न मतगणनाअनुसार लालबाबुले ६७५ मतान्तरको जित हासिल गरेका छन् । लालबाबुले ३३ हजार ९४१ र शेखरले ३३ हजार २६६ मत पाएका छन् । केहि दिन अघिको चुनावी सभामा शेखर कोइरालाले आफ्नो प्रतिद्वन्दी कोहि नभएको बताएका थिए | उनले लालबाबु पण्डित भन्ने मान्छेलाई आफुले नचिनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए | सोको जवाफ पण्डितले ‘देश–विदेश सबैतिर म परिचित छु तर डा. कोइरालाले मलाई चिन्नु भएको रहेनछ,’ , ‘विजयी भएपछि साइकल चढेरै कोइराला निवास पुग्छु र उहाँलाई सबैभन्दा पहिले लड्डु खुवाउँछु अनि आफ्नो परिचय पनि दिन्छु ।’ भनेर दिएका थिए | पण्डितको आत्मकथा 'सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष' प्रकाशित छ | जसको एउटा अंश यहाँ प्रस्तुत छ |
बिहान ७ बजेको थियो । म पुल्चोकस्थित क्वार्टरमै थिएँ । एक–दुई जना पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटका लागि कुरेर बसेका थिए । भारतीय दूतावाससँग सम्बन्धित एक जना आइपुगे ।
‘भरत सुवेदीले जेजे भन्छ त्यो काम गरिदिनुस् । उसले भनेको काम नगरे राम्रो हुन्न,’ चेतावनीकै शैलीमा उनले भने ।
मैले कुरा सुनेँ । उनीसँग सवाल–जवाफ गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । उनी गए ।
दिउँसो १२ बजे । म मन्त्रालयमै थिएँ । मेरो मोबाइलमा एसएमएसको घन्टी बज्यो । एसएमएस मलाई बिहान भेट्न आउने व्यक्तिले पठाएका रहेछन् ।
‘भरत सुवेदीलाई दुई घण्टाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा दिनुस् । त्यति समयभित्र सरुवा नदिए तपाईंले जेपनि भोग्नुपर्छ,’ एसएमएसमा भनिएको थियो ।
कर्मचारीले आफ्नो कामकालागि आफैं र राजनीतिक नेतामार्फत् दबाब दिनु त स्वाभाविक हो । तर आफ्नो सानो स्वार्थपूर्तिकालागि विदेशी मानिससमेत प्रयोग गर्नु जस्तो गैरजिम्मेवार र नीच हर्कत हुन्छ भन्ने सोचेको पनि थिइनँ । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्ति देखेर दुःख लाग्यो ।
सुवेदी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका बढी आम्दानी हुने भन्सार र राजस्वमा लामोसमय बसेका थिए । म मन्त्री भएपछि उनले त्यस्तै ठाउँ खोजेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा जान उनले प्रयास गरे । मैले रोकेको थिएँ । सुवेदीको विगत राम्रो नभएको सूचना मसँग थियो । एमालेका नेता, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अन्य मन्त्री मार्फत् उनले दबाब सिर्जना गराएका थिए । मैले कसैको कुरा नसुनेपछि दूतावास गुहारेछन् ।
म दूतावासका कर्मचारीको धम्कीसँग किन डराउने ? मन्त्री हुन्जेलसम्मै सुवेदीले भनेको काम गरिनँ । म मन्त्री हुँदै उनले अवकाश पाए ।
म मन्त्री भएको केही समयपछि सुवेदी बढुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आएका थिए । बढुवा भएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिएर खटाउने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । मलाई एमालेका केही नेताले ‘भरत सुवेदीले तपाईंसँग भेट्न खोजेका छन्, उनको कुरा सुनिदिनुस्’ भनेका थिए । म एमालेको कोटाबाट मन्त्री भएकाले पार्टीकै नेताहरू मार्फत् गयो भने आफ्नो काम गराउन सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको रहेछ ।
मन्त्रालयको आफ्नै कार्यकक्षमा थिएँ । त्यही बेला सुवेदी छिरे । उनका आफ्नै गुनासा थिए । एक महिना पछि मलाई भेट्न मन्त्री निवासमा आए ।
‘म तपाईंलाई सहयोग गर्छु, मेरो सरुवा मिलाइदिनुस्,’ उनले भने ।
मलाई उनीबारे त्यति धेरै थाहा थिएन । उनकैबारे कुरा चल्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा गरिदिने व्यहोराको चिठी आयो । त्यसपछि सोच्न थालेँ । चिठीबारे पनि बुझेँ । उनलाई किन अरू नभएर अर्थ मन्त्रालय नै चाहिने ?
मसँग सङ्गत भएकाहरूले सुवेदीको कुरा गर्न थाले । मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो । मकहाँ आउने धेरै मान्छेले उनकै कुरा गर्थे । उनी सबैकहाँ पुग्दा रहेछन् । किन भरत सुवेदीको नाम सबैले लिन्छन् ? बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्रन खोजेका २२ जनाको सूचीमा उनको नाम पनि रहेछ । अर्थ मन्त्रालय, राजस्व विभाग, तातोपानी भन्सार कार्यालय लगायत जहाँ–जहाँ गए, त्यहाँ उनको आचरण राम्रो रहेनछ । उनले पठाएका मानिसहरू पनि उस्तै । यसले त मलाई झन् गम्भीर बनायो ।
सुवेदी भने घमण्डी थिए । कसैलाई नटेर्ने । सबैलाई आर्थिक प्रलोभनमा पाररे आफ्नो हातमा लिने बानी रहेछ । त्यो प्रयास मलाई पनि गरे । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उनलाई अर्थमा लैजान बढी जोड गर्नुभएको थियो ।
‘मैले अर्थमा पठाउन पत्र लेखेँ । तपाईंले त्यति काम पनि नगरिदिने ? सुवेदीलाई मकहाँ पठाइदिनुस्,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले धेरैपटक यस्तै भाषामा मलाई भन्नुभयो । मैले टेरिनँ । आफूले भनेको नभए आफू खुसी काम गर्ने प्रवृत्ति मन्त्री डा. महतको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएर पनि सुवेदी हाजिर गर्दैनथे । उनलाई श्रमको तालिम केन्द्रमा पठाइदिएँ । श्रममा गएर पनि हाजिर गरेनन् । उनले ८९ औं दिनमा हाजिर गरे । ९० दिनसम्म हाजिर नगरे राष्ट्रसेवक स्वतः बर्खास्तगीमा पर्ने भएर उनले अन्तिम दिन हाजिर गरेका हुन् । उनी आफ्नो अहमता देखाउँदै हिँडेका थिए । उनलाई मन्त्री डा. महतले बढी संरक्षण गरको पाएँ ।
‘म सामान्यको चिठी र सरुवा मान्दिनँ,’ उनी खुलम खुला बोल्दैहिँडे ।
‘९० दिन पुगेपछि म बर्खास्त गरिदिन्छु,’ मैले भनेँ ।
अर्थमन्त्रीले अर्थमा पठाउन भन्न छाड्नुभएको थिएन । ‘यो मेरो प्रतिष्ठाको विषय हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘पहिला हाजिर त होऊन्, त्यसपछि तपाईंले नै भनेका ेठाउँमा पठाइदिन्छु,’ मैले भनेँ ।
म अर्थमन्त्रीसँग प्रक्रियाको कुरा गर्दै थिएँ । तर सुवेदी सरुवा नै नभई अर्थ मन्त्रालय गएछन् । थाहा पाएपछि मलाई जङ्ग चल्यो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा निकालेँ । ‘अर्थ मन्त्रालयले सरुवा गर्ने कुन कानुन कुन देशको सिस्टममा छ ? सामान्यले बाहेक अरूले सरुवा गर्न मिल्दैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै अर्थले सरुवा गर्ने ?’ मैले भनेँ ।
अरू मन्त्री बोल्नुभएन । डा. महतले भने प्रतिवाद गर्नुभयो, ‘तपाईंलाई पटक–पटक भनेँ । काम नभएपछि मैले हाजिर गराएको हुँ ।’
‘कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार अर्थलाई छ ?’ मैले भनेँ ।
चर्काचर्की भयो ।
त्यसपछि ‘कुन अधिकार प्रयोग गररे भरत सुवेदीलाई अर्थमा पठाइएको हो ? श्रमलाई चिठी लेखेँ। अर्थलेमाग गरको हुनाले पठाइएको भन्ने जवाफ आयो । माग गरकाले पठाउनेअधिकार कुन दफामा छ भनेर सोधेँ ।
सुवेदी राजस्व विभागमा हाजिर भएका थिए । त्यही विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएँ । ‘तपाईंले कुन कानुनले हाजिर गराउनुभयो ?’ मैले भनेँ । ‘म तपाईंलाई पा“च दिनको समय दिन्छु । पा“च दिनभित्र सुवेदी फिर्ता नभए तपाईं डीजी रहनुहुन्न । म तपाईंलाई पनि बर्खास्त गरिदिन्छु । र, छैटौं दिन अर्थ मन्त्रालयको सचिव पनि रह“दैनन् । यो कुरा सचिवलाई सुनाइदिनू ।’
उनी अक्क न बक्क भए । पा“चौं दिनमा सुवेदीलाई श्रमको तालिम केन्द्रमा फिर्ता पठाइदिए । यही बीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । बैठकबाट सुवेदीको श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भयो । उनी श्रम मन्त्रालय पनि जान मानेका थिएनन् । श्रममा नजाने हो भने के गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छु भनेर धम्क्याए पछि मात्र उनले हाँजिर गरे । श्रमले वैदेशिक विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएछ । त्यो त श्रमको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो ।
एक जना सामान्य कर्मचारीको विषयलाई लिएर भएको नियति हो यो । यसबाट हामी कसरी चलेका छौं र हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कसरी चलेकोछ भन्ने बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ ।
मेरो सूचनामा उनीसँग अस्ट्रेलियाको पीआर थियो । नक्कली नामले भारतको रासनकार्ड लिएका थिए । त्यही रासन कार्डबाट अस्ट्रेलियाको पीआर लिएका हुन् । नेपालबाट नलिएको हुनाले ‘मसँग पीआर छैन’ भन्न उनलाई सजिलो भयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुवेदीको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय टोली बनायो । उनको जन्म मिति किटान गर्नु थियो । उनको रेकर्डमा र नागरिकतामा बेग्ला बेग्लै जन्म मिति थियो । त्यो टिमले छानबिन गरपछि उनको जन्म मिति १४ असोज २०१४ कायम भयो । १४ असोज २०७२ बाट उनी निवृत्त भए । नेपालबाट पीआर लिएको देखिएन । उनले लिएको स्वीकार गरको भए पनि कानुनी प्रावधान अनुसार अघि बढ्दा सेवाबाट निवृत्त भइसक्ने हुनाले त्यता प्रवेश गरनों ।
मलाई प्रभावित गर्न उनले हर सम्भव प्रयास गरका हुन् । एमालेका नेता भेटे । मेरा इष्टमित्र, आफन्त सबैकहाँ पुगे । उनको विषयमा एमालेका साना–ठूला गरी करिब २५ जना भन्दा बढी नेताले सिफारिस गरे । पार्टी अध्यक्ष बाहेक अधिकांश नेतासँग आफ्नो कुरा पु¥याएर भन्न लगाए । केही त मेरो टोल छिमेक मोरङका मानिस पनि थिए । सांसदहरू पनि सुवेदीकै सिफारिस बोकेर आउनुभयो । सुवेदीकै विषयले मैले थ्रेट महसुस पनि गरँे। पार्टीका नेताहरूले पनि मलाई सुनाउनुभयो। ‘म कुनै पनि दबाबसँग झुक्दिनँ,’ सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेँ ।
झलनाथ खनाल, माधव नेपालसम्मले ‘सुवेदीलाई अन्याय भयो, न्याय दिलाइदिनुस्’ भन्नुभयो । ‘अन्याय हुन दिएकै छैन,’ म भन्थेँ । मेरो ज्यानको सुरक्षा खतरा छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वसम्म जानकारी भएछ । नेताहरूले सतर्क गराउनु भयो । सरकारी सेक्युरिटीमा ख्याल गर्न थालेँ । सरकारले आफ्नै तरिकाले सुरक्षाको बन्दोबस्ती ग¥यो ।
जे भन्यो त्यही मैले गरको भए मेरो पहिचान स्थापित हुने थिएन । एउटै मानिसका लागि धेरै दबाब आएपछि मैले सार्वजनिक रूपमै खराब मान्छेका पनि धेरै मानिस हुँदा रहेछन् भनेर बोलेँ ।
यसै हप्ता प्रकाशन हुन लागेको लालबाबु पण्डितको आत्मकथा 'सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष' को पुस्तक अंश । यो पुस्तक पब्लिकेशन नेपालयले छापेको हो ।
साभार: कान्तिपुर, कोसेली, २५ कार्तिक, २०७४
पण्डितको यो पुस्तक अर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |